Nanohitra teo am-pisamboran’ny zandary azy: maty voatifitry i Talata, lehiben’ny ”Bande des 11” | NewsMada
Nanohitra teo am-pisamboran’ny zandary azy: maty voatifitry i Talata, lehiben’ny ”Bande des 11”
Nihevitra ny hanao sambo-belona azy ihany ny zandary, saingy mbola nanohitra ihany ny lehilahy. Voatery nampiasa ny fitaovana teo am-pelatanany ny mpitandro filaminana ka lavo tamin’izany i Talata, lehiben’ny ”Bande des 11”, mpanao asan-jiolahy mahery vaika ao Toamasina.
Maty voatifitry ny zandary tany Ambalamanasy Toamasina i Talata, voalaza fa lehiben-jiolahy any an-toerana ary tena mampihorohoro mihitsy. Namaly ny zandary saika hisambotra azy izy io, ary izao niafara tamin’ny tifitra izao.
Nametraka paik’ady ny zandarimariam-pirenena tamin’ny alalan’ny “Hetsika
Fandio”, ary nahazoan’izy ireo loharanom-baovao fa izany ekipan’ny “Bande des 11” izany ny tena tambajotran-jiolahy mahery vaika any Ambalamanasy Toamasina.
Niezaka ny nitondra fitarainana tamin’ny prefetn’i Toamasina, i Benandrasana Cyril, ny sefo fokontany ny tokony hametrahana mpitanndro filaminana any an-toerana satria isaky ny misy asan-jiolahy, misy fahatarana hatrany ny fahatongavan’ny mpitandro filaminana. Anisan’ny antony nametrahana zandary ao amin’ny fokontany Ambalamanasa, anatin’ izao “Hetsika Fandio” ataon’ny zandary izao, izany.
Nambaran’ny kolonely Ranaivoarison Théodule, kaomandin’ny vondron-tobim-pileovana ny zandarimaria Atsinanana, fa nisy vokatra izany ny alin’ny alahady 7 oktobra teo fa lavon’ny balan’ny zandary i Talata, 35 taona, lehiben’ny andian-jiolahy antsoina hoe “Bande des 11”. Nambaran’ny fokonolona fa tena mampitondra faisana ny mponina eny amin’ny faritra Ambalamanasy iny ireo jiolahy ireo. Ny fokonolona rahateo, matahotra azy avokoa. Raha ny loharanom-baovao hatrany, efa nihevitra ny hisambotra azy velona ny zandary, saingy nanohitra ilay jiolahy ka voatery nampiasa ny fitaovam-piadiana teny am-pelatanany ny mpitandro filaminana. Hatramin’ny fotoana nanoratanay ny lahatsoratra, mbola tsy nisy fianakaviana naka ilay razana ao amin’ny tranom-patin’ny Hopitalibe.
Mafana amin’ny asan-jiolahy
Mitana ny lohalaharana amin’ny asan-jiolahy mihitsy ny any Toamasina. Any avokoa ny ahitana ireo karazana asa ratsy rehetra, toy ny kidnapping, ny fanafihana, ny fanolanana. Faritra tena ahitana fitsaram-bahoaka matetika ihany koa any. Mihevitra ny olona any an-toerana fa haharitra ny hetsiky ny zandary fa tsy handalo fotsiny. Tsy maharitra anefa ny hetsika tahaka itony fa miankina amin’ny tetibola omena ny mpitandro filaminana ihany ny faharetany. Laharam-pahamehana ny fandriampahalemana ka asa izay vola ampiasaina hampaharitra ireny karazana hetsika ireny.